२०१ स्थानीय सरकारले अझै ल्याएनन् बजेट - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com २०१ स्थानीय सरकारले अझै ल्याएनन् बजेट - नागरिक रैबार
२०१ स्थानीय सरकारले अझै ल्याएनन् बजेट
१२ साउन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको सोमबार १२ औं दिन बितिसक्दा पनि अझै २ सय भन्दा बढी स्थानीय सरकार बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्म देशभरका ५ सय ५२ वटा स्थानीय तहको मात्र बजेट पेश भएको छ ।
यो तथ्यांक मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणमा आधारित भएर बनाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।आइतबारसम्म अझै २ सय १ स्थानीय तहमा बजेट आएको छैन । बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहको कुल प्रतिशत २६.६९ हो ।
प्रदेश ५ मा राम्रो
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश ५ मा रहेका स्थानीय तहमध्ये ९१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । अब ९ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा बजेट आउन बाँकी छ ।
प्रदेश २ मा १० असारमै बजेट पेश गर्ने स्थानीय तहको संख्या मात्र ५ रहेको थियो ।
कुन प्रदेशमा कति स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट ?
प्रदेश जम्मा तह बजेट आएको बजेट नआएको बजेट आएको प्रतिशत नआएको प्रतिशत
१ १३७ १०७ ३० ७८.१ २१.९
२ १३६ ५८ ७८ ४२.६ ५८.४
बागमती ११९ ९५ २४ ७९.८ २०.२
गण्डकी ८५ ६७ १८ ७८.८ २१.२
५ १०९ ९९ १० ९०.८ ९.२
कर्णाली ७९ ६६ १३ ८३.५ १६.५
सुदुरपश्चिम ८८ ६० २८ ६८.२ ३१.८
कुल ७५३ ५५२ २०१ ७३.३१ २६.६९
समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ ?
स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानूनी रुपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार केन्द्रबाट जाने विभिन्न प्रकारका अनुदान रोकेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट ल्याउने र त्यसलाई कानून अनुसार कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने जिम्मेजारी स्थानीय जनप्रतिनिधिको भएको भन्दै त्यसरी समयमै काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई जनताले अर्को चुनावमा हराएर कारवाही गर्न सक्ने बताएका थिए ।
‘काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई हामीले त केही गर्न सक्दैनौं, उनले भनेका थिए, ‘अर्को चुनावमा जनताले भने पक्कै कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ ।’
कोल्टीमा स्वाथ्यकर्मी गिरी माथि आक्रमण
मार्तडीदेखि दवारी सम्मको सडक सूचारु
काठमाडौं । एक सय ५१ स्थानीय तहले अझै पनि पेश गरेको बजेट विवरण पठाएका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पेश गरेको बजेट विवरण पठाउन पटकपटक निर्देशन दिए पनि अझै पनि १५१ स्थानीय तहले बजेट विवरण नपठाएका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीकाअनुसार अहिलेसम्म ६०२ स्थानीय तहले […]
आन्तरिक विवाद र जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारीका कारण सिरहाका ६ स्थानीय तहले गत असार १० गतेसम्ममा ल्याउनुपर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै प्रस्तुत गर्न नसक्दा अन्यौलता बढ्ेको छ। सङ्घीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी असार १० भित्रै बजेट ल्याइसक्न निर्देशन दिए पनि सिरहाका १७ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन असफल भएका हुन्। […]
ऊर्जामा कसको के अधिकार ?
देशले संविधान पाएको पाँच वर्ष भयो । संविधान बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलविद्युत् क्षेत्रको अन्योलताले ऊर्जाको विकासमा बाधा पुगेको विज्ञहरु बताउँछन् । स्रोतको दोहोनमा दायित्व र जिम्मेवारी छुट्टिएको छैन । लामो समयसम्म कानुन संशोधन हुन नसक्दा सङ्घीताको मर्मअनुसार विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारण हुन सकेको छैन । सङ्घीतासँगै देश ७ प्रदेशमा […]
काठमाडौं । ‘अब देशमै छ रोजगारी’ अभियान औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ । एक भर्चुअल कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाले उद्योगपतिहरु, स्किलिंग इकोसिस्टम सरोकारवालाहरु, दाता, मिडिया तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु बीच उक्त अभियानको सार्वजनिक गरेका हुन् । रोजगारी सर्भिस र युकेएड स्किल फर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम (सीप) को पहलमा यो अभियान प्रवासी पुनरागमनहरु र अन्य […]